‘Mandraisa andraikitra ao amin’ny vondrom-piarahamoninao’: Mandrisika ny fikatrohana mafy kokoa ny vehivavy Amerikana miady hijoroan’ny rariny · Global Voices teny Malagasy
Ny dia lavitra mankany amin'ny rariny ao Amerika, Fizaràna fahatelo: ny tantaran'i Katrina Johnson
Voadika ny 10 Mey 2018 7:57 GMT
Ity no fizarana farany amin'ny andian-dahatsoratra telo izay nahitana ireo vehivavy telo – avy any Jamaika, Brezila ary Etazonia – nivondrona mba hanasongadina ny olana momba ny herisetra ataon'ny polisy sy ny famonoan'olona tsy mandalo fitsarana any Amerika, miaraka amin'ny tenirohy # MijoroHoAn'nyRarinyIzy. Nitsidika an'i Kingston, Jamaika vao haingana izy ireo mba hizara ny eritreriny taorian'ny nahafatesan'ny fianakaviany iray. Vakio eto ny fizarana voalohany ary eto ny fizarana faharoa [mg].
Tamin'ny volana Martsa 2018, nitsidika an'i Jamaika i Katrina Johnson mponina ao Seattle, Washington, niaraka tamin'ny mpikatroka Breziliana Ana Paula Oliveira sy zanak'i Shackelia Jackson teraka tao Kingston nandritra ny fanentanan'ny Amnesty International izay notohanan'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona ao an-toerana Jamaikana ho an'ny Rariny.
Nanamarika i Johnson fa nesorina tamin'ny andraikiny ireo polisy tompon'andraikitra fotoana fohy taorian'ny nahafatesan'ny mpiray tampo aminy. Nisy ny fanadihadiana natao taorian'izay, saingy talohan'ny nahavitan'izany dia nilaza taminy ny mpampanoa lalàna fa tsy voampanga ireo manamboninahitra. Ao amin'ny fanjakan'i Washington, rehefa manambara ny mpitandro ny filaminana fa matahotra izy ireo noho ny fiarovana ny ainy dia efa ampy amin'ny fanafoanana ny fanenjehana azy ireo izany. Nilaza ireo mpanao fanadihadiana fa mety nitazona antsipika ilay mpiray tampo aminy izay vehivavy kely iray niantso ny 911 mba hitatitra ny mety ho fisian'ny vaky trano .
Tao anatin'izany voina izany, nanomboka nanampy ireo fianakaviana hafa tamin'ny toe-draharaha toy izany i Johnson tamin'ny alalan'ny fikambanana iray tao an-toerana, ary nanazava hoe: “Sady tsy maintsy misaona aho no miady ihany koa.” Nanampy tamin'ny fananganana vondron'olom-pirenena sy ny vondron'ny vitsy an'isa, sendikà ary mpisolovava izy, izay nanao fanerena hanovàna ny lalàna ao amin'ny fanjakan'i Washington. Ny fanentanana De-Escalate Washington dia nametraka fangatahana ny volana May 2017 (Initiative I-940) ; tamin'ny 6 Martsa 2018, ary nahitana fahombiazana izany.